Fanadinana… politika | NewsMada
Ho raikitra ihany ny fanadinana ho an’ireo katitakely , rahampitso rehefa nifanenjana nandritra ny telo volana ny mpanabe sy ny fanjakana. Ny an-tanan-dehibe aloha izany no fantatra fa hiroso amin’izany adina izany, ireo ankizy ireo. Tsy hay ny miseho any amin’ny tany lavitra andriana any… Nisafotofoto ny fanomanana. Hatao tsy hatao ny fanadinana. Nitaintaina ny ankizy sy ny ray aman-dreny… Hanao ahoana ihany ?
Tahaka izany koa ny politika. Nialohavan’ny hatao ihany izy ity sa ahoana? Niroso ihany anefa ary izao efa nametraka ny fisoratany anarana ho mpiadina izao etsy Ambohidahy ireo kandidà… Mbola ampahany ireo fa maromaro ireo mbola hisoratra anarana. Hivoaka mialoha ny faran’ny volana ireo afa-panadinana hiatrika ny tena dingana manaraka ary hotsarain’ny vahoaka. Raha jerena ankapobeny ireto mpiadina ireto, misy mitonona ho olom-baovao, mpitondra fivavahana, mpanakanto, sendikalista, mpahay toekarena, mpanao politika, jeneraly manamboninahitra, mpahay toekarena… Ao koa ireo tena niomana sy vonona ho amin’izany fanadinana izany tokoa. Ao koa anefa ireo mitifitra ny lanitra, sitrany hahavoa tendrombohitra. Ny hafa indray, efa fantatra izao fa tsy ho lany. Zara raha hihazo mihoatra ny 0% mahery kely. Efa fantatra ilay ketrika…Mba hahazo toerana minisitra na hotendrena amina toerana ambony satria hanohana ny matanjaka amin’ny adina andiany faharoa. Manampy izany ireo hivarotra ny vatony amin’n y volabe ho sandan’ny fanohanana amin’izany fanadinana fihodinana faharoa izany, satria efa naderadera teny an-kianja fa manana ondry marobe aoriany. Tena samy manana ny tetikadiny sy ny paikady ary ny stratejia tokoa… Fanadinana politika io tsinona koh ! Afaka dimy taona indray vao hiverina ny adina tahaka izao ka hararaotina… Sady hitsapana hery ho an’ny sasany. Hirariana mba ho fanadinana tsy hisy hosoka sy hangaraharaha ary hadio izany. Hoeken’ny besinimaro ny ho vokany eo ary tena hitondra ny fanovana sy ny fiovana ary koa ho amin’ny fanorenana ifotony dradradrain’ireto mpanala fanadinana politika ireto…
Efa maro ihany ireo niatrika izany teto ary nifandimby fa izao mbola mitoetra sy nahazo faka izao ny fahantrana sy ny fahalovana. Ny kolikoly sy ny tsy fandriampahalemana… Araka izany, fotoana izao mba hananan’ny vahoaka sy ny mpanao politika fahamatorana eo amin’ny fotokevitra, miaraka amin’ny asa fa tsy fisehosehoana ivelany fotsiny, tahaka ny nifandimbiasana teto hatramin’izay. Mandra-piandry izany, mirary soa ho an’ireo katitakely amin’ny fanadinana, rahampitso…